ဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေရတာလဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်နေပီလား? - Amawpyay
အသက်ရှင်နေရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာမှန်း မသိတော့ တဲ့အခါ၊ ဖြစ်ချင်လှ ပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ အိမ်မက်တွေ ဝေဝါးလာ တဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုး မရှိတော့သလို ခံစားလာရတတ် ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘဝမှာ လမ်းပျောက်ခြင်းရဲ့ အစပါပဲ။
အမြင့်ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး အားငယ်နေ မိတယ်။ ပန်းတိုင်ကို ရှေးရှုလှော်ခတ်နေတဲ့သူတွေကို ငေးပြီး သိမ်ငယ်နေမိတယ်။
လူတိုင်း လူတိုင်း ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အခိုက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကရော ဘာလဲဆိုတာကို အဖြေရှာရင်း..ပျောက်ဆုံးရင်း အဓိပ္ပာယ်မဲ့နေမိတော့တယ်။
ဒီအခြေအနေမျိုးကို သင်တစ်ယောက်တည်း ကြုံဖူးတယ်လို့ ထင်နေရင်တော့ တော်တော်မှားယွင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို လမ်းပျောက်ခြင်းမျိုးဟာ ထိပ်တန်းအဆင့် အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်း ကြုံဖူးတယ်။
သာမန်အဆင့် အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်း ကြုံဖူးတယ်။ မအောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်း ကြုံဖူးတယ်။ အရှုံးသမားတွေလည်း ကြုံဖူးတယ်။
သူတို့တွေကြား ကွာသွားတာက တစ်ချို့က လမ်းပျောက်တယ်လို့ ခံစားရရင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မတွေ့ တွေ့အောင် ပြန်ရှာကြတယ်။ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင် ပြန်အားထုတ်ကြတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ လမ်းပျောက်ရက်သားနဲ့ ကြုံသလို ဆက်လှမ်းကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ လမ်းပျောက်လို့ ပျောက်နေမှန်းတောင် မသိဘဲ တစ်ချိန်ကျ ကမ်းပါးအစွန်းကနေ ပြုတ်ကျသွားတတ်ကြတယ်။
တကယ်လို့ သင်လည်းပဲ လမ်းပျောက်နေပြီလို့ ခံစားရရင် သင့်ဘဝလမ်းကြောင်းကို အချိန်မှီ ပြန်ရှာဖို့လိုပါတယ်။
လမ်းပျောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတတ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ အားငယ်မှုတွေ၊ အကြောက်တရားတွေ အားလုံးကို မေ့လိုက်ပါ။ သင့်စိတ်ကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ အနားပေးဖို့လိုပါတယ်။
စိတ်ဒဏ်ရာတွေပေးမယ့် အတွေးတွေအစား သင့်စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာတွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်မှုကို တည်ဆောက်လိုက်ပါ။
စိတ်တွေလန်းဆန်းပေါ့ပါးသွားပြီလို့ ခံစားရရင် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခွန်အားတွေသန်မာလာအောင် တည်ဆောက်ရပါမယ်။ စိတ်ခွန်အားဖြည့် စာအုပ်တွေဖတ်တာ၊ ဟောပြောပွဲတွေ နားထောင်တာ၊
ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတဲ့ သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ တာတွေကနေ စိတ်ခွန်အားတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ (တက်ကျမ်းစာအုပ်တွေ ဟာ ခဏတာ စိတ်ဓါတ်မြှင့် တင်ရာမှာ အသုံးဝင်ဆဲဖြစ်လို့ ဒီလို အခြေအနေတွေ မှာတော့ စာအုပ်တွေကနေတစ်ဆင့် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။)
လမ်းပျောက်နေတဲ့ ကာလတစ်လျှောက်လုံး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ထက်သန်စိတ်ကို ပြန်ရှာရပါမယ်။ ထက်သန်စိတ် ဆိုတာ ကတော့ အလွယ်ပြောရရင် လုပ်ချင်၊ကိုင်ချင်စိတ်ပါပဲ။ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုတဲ့စိတ်၊ အားထုတ်လိုတဲ့စိတ်၊ အောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်ကို ဒီအချိန်မှာ ပြန်ရှာရင် ပြန်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
🔹4. အိမ်မက်တွေကို တည်ဆောက်ပါ
လမ်းပျောက်နေချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပေမယ့် ဒီ အဆင့်ထိရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့အတူ ကိုယ့်အလုပ်ရမယ့်အရာကို သိအောင် လုပ်ရပါတော့မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မက်ခရီးလမ်းကို စနစ်တကျတည်ဆောက်ရပါမယ်။ အဲဒီ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလည်း အောင်မြင်မှုလမ်းမပေါ်ကို နင်းရင်း ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်လို့ ခံယူချက်ပြင်းပြင်းရှိဖို့လည်း လိုပါမယ်။
🔹5. ပြိုလဲတိုင်း ပြန်ထပါ
ဘယ်အရာမှတော့ အလွယ်တကူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း အောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ လမ်းပျောက်တတ်ရုံမကဘဲ ခလုတ်လည်းတိုက်တတ်တယ်ဆိုတာ သိလာပါမယ်။
ဘယ်လိုပဲ လဲပြိုကျဦးတော့ ပြန်ထဖို့ လိုပါမယ်။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လဲကျ တယ်ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ပြန်ထခဲ့ သလဲဆို တာပဲ အရေးကြီးပါ တယ်။
Find your passion and run with them!❣️
ဘာကွောငျ့အသကျရှငျနရေတာလဲ ဆိုတဲ့အတှေးတှနေဲ့ လမျးလြှောကျရငျး လမျးပြောကျနပေီလား?
အသကျရှငျနရေတဲ့ ရညျရှယျခကျြက ဘာမှနျး မသိတော့ တဲ့အခါ၊ ဖွဈခငျြလှ ပါခညျြရဲ့ဆိုတဲ့ အိမျမကျတှေ ဝဝေါးလာ တဲ့အခါ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို တနျဖိုး မရှိတော့သလို ခံစားလာရတတျ ပါတယျ။ ဒါဟာ ဘဝမှာ လမျးပြောကျခွငျးရဲ့ အစပါပဲ။
အမွငျ့ကိုရောကျနတေဲ့သူတှကေို ကွညျ့ပွီး အားငယျနေ မိတယျ။ ပနျးတိုငျကို ရှေးရှုလှျောခတျနတေဲ့သူတှကေို ငေးပွီး သိမျငယျနမေိတယျ။
လူတိုငျး လူတိုငျး ရညျရှယျခကျြကိုယျစီနဲ့ တကျကွှလှုပျရှားနတေဲ့အခိုကျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ရညျရှယျခကျြကရော ဘာလဲဆိုတာကို အဖွရှောရငျး..ပြောကျဆုံးရငျး အဓိပ်ပာယျမဲ့နမေိတော့တယျ။
ဒီအခွအေနမြေိုးကို သငျတဈယောကျတညျး ကွုံဖူးတယျလို့ ထငျနရေငျတော့ တျောတျောမှားယှငျးပါလိမျ့မယျ။ ဒီလို လမျးပြောကျခွငျးမြိုးဟာ ထိပျတနျးအဆငျ့ အောငျမွငျတဲ့သူတှလေညျး ကွုံဖူးတယျ။
သာမနျအဆငျ့ အောငျမွငျတဲ့သူတှလေညျး ကွုံဖူးတယျ။ မအောငျမွငျတဲ့သူတှလေညျး ကွုံဖူးတယျ။ အရှုံးသမားတှလေညျး ကွုံဖူးတယျ။
သူတို့တှကွေား ကှာသှားတာက တဈခြို့က လမျးပြောကျတယျလို့ ခံစားရရငျ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို မတှေ့ တှအေ့ောငျ ပွနျရှာကွတယျ။ လမျးကွောငျးမှနျပျေါရောကျအောငျ ပွနျအားထုတျကွတယျ။
တဈခြို့ကတော့ လမျးပြောကျရကျသားနဲ့ ကွုံသလို ဆကျလှမျးကွတယျ။ တဈခြို့ကတော့ လမျးပြောကျလို့ ပြောကျနမှေနျးတောငျ မသိဘဲ တဈခြိနျကြ ကမျးပါးအစှနျးကနေ ပွုတျကသြှားတတျကွတယျ။
တကယျလို့ သငျလညျးပဲ လမျးပြောကျနပွေီလို့ ခံစားရရငျ သငျ့ဘဝလမျးကွောငျးကို အခြိနျမှီ ပွနျရှာဖို့လိုပါတယျ။
လမျးပြောကျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈလာတတျတဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ အားငယျမှုတှေ၊ အကွောကျတရားတှေ အားလုံးကို မလေို့ကျပါ။ သငျ့စိတျကို လှတျလပျပေါ့ပါးစှာ အနားပေးဖို့လိုပါတယျ။
စိတျဒဏျရာတှပေေးမယျ့ အတှေးတှအေစား သငျ့စိတျကို ပြျောရှငျစမေယျ့အရာတှနေဲ့ စိတျဓါတျကွံ့ခိုငျမှုကို တညျဆောကျလိုကျပါ။
စိတျတှလေနျးဆနျးပေါ့ပါးသှားပွီလို့ ခံစားရရငျ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျခှနျအားတှသေနျမာလာအောငျ တညျဆောကျရပါမယျ။ စိတျခှနျအားဖွညျ့ စာအုပျတှဖေတျတာ၊ ဟောပွောပှဲတှေ နားထောငျတာ၊
ရညျရှယျခကျြကွီးတဲ့ သူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျး ဆကျဆံ တာတှကေနေ စိတျခှနျအားတှေ ရနိုငျပါတယျ။ (တကျကမျြးစာအုပျတှေ ဟာ ခဏတာ စိတျဓါတျမွှငျ့ တငျရာမှာ အသုံးဝငျဆဲဖွဈလို့ ဒီလို အခွအေနတှေေ မှာတော့ စာအုပျတှကေနတေဈဆငျ့ စိတျဓါတျခှနျအားတှေ မွှငျ့တငျနိုငျပါတယျ။)
လမျးပြောကျနတေဲ့ ကာလတဈလြှောကျလုံး ပြောကျဆုံးနတေဲ့ ထကျသနျစိတျကို ပွနျရှာရပါမယျ။ ထကျသနျစိတျ ဆိုတာ ကတော့ အလှယျပွောရရငျ လုပျခငျြ၊ကိုငျခငျြစိတျပါပဲ။ ကွိုးစားလုပျကိုငျလိုတဲ့စိတျ၊ အားထုတျလိုတဲ့စိတျ၊ အောငျမွငျခငျြတဲ့စိတျကို ဒီအခြိနျမှာ ပွနျရှာရငျ ပွနျတှနေို့ငျပါလိမျ့မယျ။
🔹4. အိမျမကျတှကေို တညျဆောကျပါ
လမျးပြောကျနခြေိနျမှာ ဘာလုပျရမှနျးမသိပမေယျ့ ဒီ အဆငျ့ထိရောကျလာပွီဆိုရငျတော့ ကိုယျဘာဖွဈခငျြတာလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးနဲ့အတူ ကိုယျ့အလုပျရမယျ့အရာကို သိအောငျ လုပျရပါတော့မယျ။
ကိုယျ့ရဲ့ အိမျမကျခရီးလမျးကို စနဈတကတြညျဆောကျရပါမယျ။ အဲဒီ့လမျးကွောငျးအတိုငျးလညျး အောငျမွငျမှုလမျးမပျေါကို နငျးရငျး ပနျးတိုငျကိုရောကျအောငျသှားမယျလို့ ခံယူခကျြပွငျးပွငျးရှိဖို့လညျး လိုပါမယျ။
🔹5. ပွိုလဲတိုငျး ပွနျထပါ
ဘယျအရာမှတော့ အလှယျတကူဖွဈလာမှာမဟုတျပါဘူး။ တကယျတမျး အောငျမွငျဖို့ ကွိုးစားတဲ့အခါမှာ လမျးပြောကျတတျရုံမကဘဲ ခလုတျလညျးတိုကျတတျတယျဆိုတာ သိလာပါမယျ။
ဘယျလိုပဲ လဲပွိုကြဦးတော့ ပွနျထဖို့ လိုပါမယျ။ ဘယျနှဈကွိမျလဲကြ တယျဆိုတာ အရေးမကွီးပါဘူး။ ဘယျနှဈကွိမျ ပွနျထခဲ့ သလဲဆို တာပဲ အရေးကွီးပါ တယျ။